I-Ultrasonic Cavitation ku-Liquid - Hielscher Ultrasound Technology
Amagagasi e-Ultrasonic of high intensity ultrasound enza i-cavitation ezinkolweni. I-cavitation ibangela imiphumela eyingozi kakhulu endaweni yangakini, njengama-jets e-liquid okufika ku-1000km / hr, izingcindezi ezifika ku-2000m kanye namazinga okushisa angama-5000 uKelvin.
Mayelana ne-ultrasonic cavitation
Lapho ukuphuza utshwala ngokweqile, amagagasi omsindo asakaze emithonjeni yamanzi ashukumisela ukushintsha ukucindezela okuphezulu (ukucindezela) nokujikeleza okuncane (ukungavamile), namazinga kuye ngokuthi imvamisa. Ngesikhathi umjikelezo ophansi ocindezelayo, amagagasi aphakeme kakhulu e-ultrasonic enza ama-bubbles amancane avulekile noma aphuma emanzini. Lapho ama-bubbles athola umthamo lapho bengakwazi khona ukuwuthola amandla, awela phansi ngesihluku phakathi nomjikelezo ophezulu wokucindezela. Lokhu kwenzeka kuthiwa yi-cavitation. Phakathi nokushisa okuphezulu kakhulu (cishe 5,000K) kanye nezingcindezi (cishe 2,000atm) kufinyelelwe endaweni yangakini. I-implosion ye-bubble cavitation nayo ibangele ama-jets ahlanzekile angama-280m / s velocity.
Ividiyo (ukulanda, 1.69MB, i-MPEG1-Codec) ngakwesobunxele kubonisa i-sonotrode engxenyeni yeglasi, egcwele amanzi. I-amplitude ephezulu eyenziwe yi I-UIP2000hd Iprosesa ye-ultrasonic iveza ama-bubbles cavitation. Ukukhanya okubomvu kusuka phansi kwe-tube kwenza ama-bubbles avumayo abonakale. Ububanzi obunjalo bhubhu buyi-150mm. Ukusetha ngaphakathi kwesitsha sokugeleza kufana nalokhu kuvidiyo. Ukungena kwe-liquid by cavitation kubonakala kakhulu. Ukulanda ividiyo, sicela uchofoze esithombeni kwesokudla.
Uhlelo lokusebenza lwe-Cavitation
Imiphumela ingasetshenziselwa uketshezi ngezinqubo eziningi, isib. Ukuxuba nokuxuba, ukuguqula, Ukukhokha futhi cell nokwahlukana. Ngokuyinhloko ishear ephezulu ye-jets egazini idala ukukhwabanisa ezindaweni ezincane nezinhlayiyana ze-inter-particle.
USuslick (i-Univ of Illinois)
I-Wikipedia – cavitation